Okwu mmeghe na uzo ojoo nke Mosaic | Site na Linux
Okwu mmalite banyere akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mozis
mgbochi | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Kedu ihe dị omimi m chọtara maka nke a ... Mana nke mbụ, m na-ewebata onwe m. M na-emegide na nke a bụ mbido mbụ m na DesdeLinux. Ọ bụghị na m nwere ọtụtụ ihe m ga-eweta, yabụ m ga-ekwu na enwere m nnukwu obi ụtọ mgbe m na-ede ihe a.
Ka o sina dị, taa achọrọ m ịchọpụta otu akụkụ nke ndị njikwa windo nke yiri ka ọ bụ ihe a na-ahụtụbeghị mbụ na isiokwu blog. Ọnọdụ desktọọpụ ọ bụla nwere ndị njikwa windo na ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ihe atụ desktọọpụ nke anyị niile maara. Ọtụtụ ga-amatarịrị ihe m ga-akọwa n'okpuru, mana echiche nke a bụ ime ka ndị chọrọ ịma banyere ha mara ha.
Anyị na-akpọ ndị njikwa windo a na-ese n’elu mmiri, maka eziokwu dị mfe na ise n'elu na desktọọpụ, free na na-enweghị usoro a kapịrị ọnụ. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịdọrọ windo anyị na ọnọdụ ọ bụla, dịka anyị na-eme.
Otherdị ndị ọzọ nke ndị na-ahụ maka windo nwere aha na-atọ ọchị. Ndi tiling ndị njikwa windo (nke a na-atụgharị na ndị njikwa windo taịlị) na ndị a na-edozi windo n'usoro, haziri na desktọọpụ, na-ahụ na anyị kwụsịrị igbu oge ịhazi windo anyị wee banye ọrụ.
Fọdụ n'ime ndị na-achịkwa windo ndị a gụnyere na desktọọpụ gburugburu gụnyere ụfọdụ njirimara nke ịgbanye na n'ezie ọ bụ a mgbe niile na-emekarị na oge a na desktọọpụ, dị ka KDE (nke nwere ugbua isiokwu na-akọwa ya) ma ọ bụ Xfce na Gnome site na ịdọrọ windo na nsọtụ ihuenyo.
Xmonad, na ụtụ nye Dennis Ritchie. Ọ bụghị ya mara mma?
Agbanyeghị, ndị njikwa windo taịl nile na-adịkarị iche na ndị a. Mgbe Kwin, Metacity na ụlọ ọrụ na-eji tiling dị ka ihe mgbakwunye, ndị njikwa dị ka Xmonad, Awesome na ndị ọzọ nwere tiling dị ka mkpụrụ obi ha na ịgbatị ya ruo oge nhazi.
Ọtụtụ mgbe, windo anyị dị ezigbo mma. Ha nwere nkuku, bọtịnụ, na aha. Achọghị ọzọ. Ihe niile na-abanye. Ihe niile ewepụrụ ma dochie ya site na mkpirisi keyboard, ọ bụ ezie na ha nwekwara ike ịlaghachi site na ntọala. Na-ada ada? Ee, ezi.
M na-akọwa. Ndị nlekọta taịl nile na-ejigide ókèala windo na ihe ndị ọzọ. Fọdụ na-anwa ịnye ihe dịka ogwe na bọtịnụ, mana anaghị achọrọ ya. Nke a bụ minimalism na arụmọrụ. Ihe niile aghaghi ime ya na keyboard, n'ihi na o kariri ngwa ngwa na n'ihi na anyi ghaghi itinye aka na keyboard.
Ọ na-ekwu banyere ntọala. Enweghị ihe dịka 'interface interface' ebe a iji hazie ihe ọ bụghịkwa ihe ijuanya. Agbanyeghị na a na-ejigide ọtụtụ ndị njikwa a site na iji faịlụ nhazi dị mfe, a na-ejigide ndị dị ike n'ezie na asụsụ mmemme zuru oke. Na scares na m ga-enye ihe atụ.
Xmonadjiri Haskell; asụsụ zuru oke ma jikọtara ọnụ.
Awesomedị ka nke 3, jiri Lua.
DWMjiri nkụnye eji isi mee nke C.
Subtleusa Ruby, otu ihe a na-eji nke ukwuu na mmepe weebụ
Na ọtụtụ ihe atụ ndị ọzọ. Ọ dị ka enwere otu maka ụdị mmadụ niile.
Kedu ihe dị mma banyere ya? Ọtụtụ ihe na ịnwere ike ịhazi ebe ọrụ gị. Enwere m mmasị n'echiche Xmonad na eziokwu a na-eme ya na Haskell na-eme ka ọ bụrụ ọpụrụiche.
1 Hà bụ ezigbo echiche?
2 Kedu onye ị na-akwado mgbe ahụ?
Hà bụ ezigbo echiche?
N'ezie. Ọ dị mma na windo gị dị ka nke a ma bụrụ oke ọkụ n'ụzọ. Ekwadoro m ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ile anya na sistemụ gị dị ka ihe dị ịtụnanya ma dị ike.
Kedu onye ị na-akwado mgbe ahụ?
Ọ dịghị onye n'ezie. Ọ bụghị ruo mgbe ị matara mkpa gị. Banye ebe dị otú ahụ nwere ike bụrụ ihe na-agbawa obi ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-eme. Ọtụtụ ndị mmadụ na-amalite na Awesome, mana maka m faịlụ nhazi ha dị oke njọ ma weta m obere nsogbu n'oge ahụ.
Na mgbakwunye, echiche nke minimalism dị oke mma nke na ị malitere na njikwa windo ma gaa na nchịkọta akụkọ, ihe nchọgharị ahụ, ọkpụkpọ egwu, onye njikwa faili ... N'ihi na ihe kachasị ntakịrị ngwa bụ ndị nọ na ọdụ na ndị a na-ebu. nke ọma na ndị njikwa. Ọ bụrụ na ụjọ na-atụ ọdụ ụgbọ elu, ị ga-ebido ebe ahụ.
Mosaic bụ ụwa mara ezigbo mma. Onwere udiri ugbua igha site na ndi oru ndi na-ese n'elu mmiri na mosaic na ufodu ndi otu ndi oru aka (ma oburu na ikwenyeghi m, lelee ArchLinux forums ma choo ndi oru oma dika FVWM, nke nwere onye oru kwesiri ntukwasi obi nke mechara kwaga ndi mosaic) ). Ọ bụrụ na ị ka chọrọ ịbanye na ha, ọ bụ ihe gbasara ịnwale, njem uka ruo mgbe ịchọtara nke ziri ezi.
Ọ dị mma nke ahụ maka ugbu a. Anyị ga-aga n'ihu na ịgagharị n'oge na-adịghị anya, Xmonad na ụlọ Debian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Okwu mmalite banyere akụkụ gbara ọchịchịrị nke Mozis
Ihe 40 kwuru, hapụ nke gị
Obi ụtọ na mmadụ kwuru na tilers. Ahuru m gi n'anya. Scrotum gị dị egwu!
Xmonad dị ezigbo mma mana ana m ahọrọ DWM na Spectrwm (nwanne nwanne Xmonad).
Enwere m olileanya ịhụ post ndị ọzọ sitere n'aka gị ụdị a.
Ọ bụghị desktọọpụ m n'ezie, ewere m ya dịka ọmụmaatụ sitere n'aka onye ọrụ DevianArt ma atụfuru m ịkọwa ya. Ndo (Ọ ga-amasị m ịme mmemme na C dị ka nke a). Nke a bụ nke izizi: http://pkmurugan.deviantart.com/art/Tribute-to-Dennis-Ritchie-263965148
Zaghachi ka mgbochi
Ah, oké Daisuke, n'ezie. 🙂
Nke ikpeazụ, aghọtaghị m. Ọ bụrụ na ị pụtara nke kere oche ahụ, ihe niile m maara banyere ya bụ na ọ bụ German. Ihe ya masịrị m 😀
Ee ee, ahụla m ihe kpatara Daisuke. Ya mere etinye ya na GitHub, na-eme ka o siere m ike ilele ntọala ya. 😀
Obinwanne 86 dijo
Ndewo ivanovnegro, (ndo maka offtopic), mana achọrọ m ịjụ gị ajụjụ, ị bụ otu ivanovnegro si ọgbakọ ndị Crunchbang?
Ee, a bụ m ihe ahụ. 🙂
Lelee gi, amaghim na I na asụ Spanish, ekele, ndi na eche ị zoputara m karịa otu mgbe, imeela gị !!!
Gaa na-adọrọ mmasị, anyị ga-anwale ha
Otu ihe dọọrọ uche m na ụdị KDE SC kachasị ọhụrụ bụ etu o si ejikwa njikwa ike, ejiri m TMUX + Awesome na-arụ ọrụ na X na laptọọpụ na-apụ apụ ka batrị ga-adịte aka ma KDE SC 4.9.1 Enwere m obere uru na, na ntụle, na-eji Awesome igwe na-ekpo ọkụ karịa iji KDE!
Ọ bụ ụzọ ọzọ maka m, mana na ọdịiche dị na Awesome enweghị ike ibi na xcompmgr. KDE gburu batrị m mana ọ naghị ehicha ya. Na-adịghị ahụkebe.
M ga-eji Tiling andiwet, ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na-arụ ọrụ na ndịna-edezi ngwa (ihe ọ bụla: Krita, Karbon, Digikam, Gimp, Inkscape, Scribus, wdg wdg ...) bụ ihe jọgburu onwe ya echiche na ha na-aghọ a zuru ezu bummer.
Nke ahụ bụ ebe m chọrọ ịga. Site na imepụta gburugburu ebe obibi gị, ịnwere ohere ị zere itinye ụdị mmemme ndị a. Achọghị m itinye ya, mana ọ bụ ezi echiche igosi ya.
Ezigbo ozi mgbochi, a kọwara nke ọma yana ọdịnaya bara uru. Nye okwu a maka ịnabata gị DesdeLinux dị ka onye na-emekọ ihe ọnụ .. Enwere m olile anya na m ga-enwetakwu gị ebe a ..
Na-ekwu okwu nke Windows Manager, M mgbe niile nke ukwuu ala na openbox na fluxbox, na-abụghị nke ha mgbe m nwere mmasị na-agbalị .. 😀
Daalụ nke ọma. Anọ m na-agafe ma ọ dabara m itinye aka na saịtị m hụrụ n'anya nke ukwuu. Banyere.
Ezigbo isiokwu. Anụtụbeghị m nke aghụghọ. ndị ọzọ ahụrụ m na ụgbụ. na-ekwu okwu banyere minimalism na ndị a oru, Echere m na ọ bụ okwu ekwesighi, ọ bụ ezie na m ekwupụta na ha nwere oké ịrịọ m. ikekwe ihe kachasị sie ike bụ idezi faịlụ, dịka ọ na-eme na ụfọdụ ihe Openbox, ọ bụ ezie na ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nweta nsonazụ dị ịtụnanya, nke na-agbagha desktọọpụ dịka KDE. ukwu !!!
Ọ dabere nke ukwuu n’otu i si were ya. Ana m ahazi Xmonad maka akụkụ nke abụọ ...
Ọmarịcha. Ana m eche maka akụkụ nke abụọ.
Ọ dị ezigbo mma, ebe ọ bụ na gnome gbanwere nke ukwuu, ma a manyere ya iji ojiji dịrị n'otu, agagharịrị m n'ọtụtụ ebe, ruo mgbe a hapụrụ m i3, eziokwu bụ na ọ dị mma, nwee ike ịhazi ya, ọ na-eri obere ego, na karịa ihe niile, ọ naghị ewe m iji mee nke ahụ Ọ bụ ihe m kacha atụ ụjọ
Agbalịrị m naanị i3 na ihe dị egwu ma m na-arapara na nke ikpeazụ n'ihi na ọ dị m mfe. Eziokwu bụ na ọ dị ka ọ dị mma iji ya ozugbo ahazi 🙂
Lee ezigbo ederede. Agbalịbeghị m ndị njikwa ahụ, ozugbo m nwere oge m ga-eme ya. Nke a na-egosi imirikiti ohere ndị dị na Linux ụwa, n'ezie na OS a enweghị oke, ma e wezụga ndị ị tinyere (ma ọ bụ nwee) onwe gị.
Ekele magburu onwe ya, ahụrụ m WM n'anya, mana abụ m onye ofufe PekWM na ụbọchị 3 anọ m na-anwale ma na-ahazi aghụghọ nke dọtara uche m na nke na-esote ga-abụ dwm, WM masịrị m ma ha mara mma karịa gburugburu dị ka gnome, xfce ma ọ bụ ọbụna kde. Ezigbo Ekele !!!
Zaghachi ka conandoel
M na-egwuri egwu oge niile. Ọ na-atọ ụtọ, mana oge ụfọdụ ana m ahụ ahụhụ nke ndị na-adọta X ...
hahaha na ihu ọma n'ime afọ 3 ndị a mụ na pọọm nọ n'ọtụtụ distros enweghị m nsogbu ...
Amaghị m ihe mere n'oge ahụ, mana anaghị m arụ ọrụ na PekWM ọzọ. Chioma.
Eziokwu bụ na ha dị ezigbo mma (ma maka ọdịdị ha na ịrụ ọrụ ha!) lee ha anya (n'ihi na anaghị m anwale ọ bụla!)
Ezi ọkwa, ekele na nnabata. Anyị na-ele anya karịa ka ị na posts 😀
Enwere m mmasị n'isiokwu ahụ, ọ ga-amasị m ụfọdụ nkuzi maka ntọala ntọala yana otu esi emezu ihe dị egwu dị ka ndị a hụrụ na http://dotshare.it/
Ana m arụ ọrụ na akụkụ nke abụọ. Echere m na ọ dị mma na ha masịrị ya ma na m eme atụmatụ ịga n'ihu n'usoro isiokwu a na nsonaazụ ikpeazụ ya. 😀
N'ihi na m na ọ bụ nnọọ ihe ọmụma, M na-amaghị ọbụna desks nke ụdị 😀
Onweghị ihe dijo
Ọmarịcha post, Amaghị m ma ọ bụrụ na etinyela ihe metụtara ndị njikwa windo na weebụsaịtị a (magburu onwe ya), m na-ekwukwa nke a n'ihi na ụfọdụ "akwụkwọ ntuziaka" ga-adị mma, ọkachasị ịgbanwe ihe dị mgbagwoju anya.
Obi di m uto na WM di egwu m, mana enwere ihe ichoro igbanwe ma enwere ozi na asusu Spanish.
Onweghi m obi uto nke ukwuu n'ihi na ọ ghọla ihe siri ike na m idezi faịlụ nhazi ahụ. Otú ọ dị, o nwere ụfọdụ envi ihe.
Anọ m na-atụ anya ịhụ ụfọdụ ntọala, oops. Nke a bụ ụfọdụ ozi metụtara isiokwu ahụ, etinyere na igbe mbata:
Cheers…. onye maara ebe akwụkwọ ahụaja ahụ dị.
Ọfọn, enweghị nhazi; n'ihi na m kwesịrị itinye otu njikwa ọ bụla ma nwalee na ha niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ana m arụ ọrụ na desktọọpụ XMonad, mana enwekwaghị m ọrụ ma chọọ ka m jiri gburugburu mara tupu ị gosipụta xmonad.hs
Maka ndị njikwa ndị ọzọ echeghị m n'oge a itinye "ndu" ọ bụla n'ihi na anaghị m eji ha.
The akwụkwọ ahụaja m ahụghị. Ndo ghara ịbụ nke enyemaka
Na-akpali nnọọ mmasị, daalụ.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na akwụkwọ ntuziaka na ndụmọdụ, ejiri m n'aka na m ga-anwale! Daalụ
Zaghachi onye mọnk
N'ezie emegoro m "akwụkwọ ntuziaka" maka XMonaxd:
Ezigbo post, m na-eji wmfs2 + archlinux http://i.imgur.com/rRzpN.jpg
Detuo faịlụ ka ọnụ na zuru ezu
Okwu ole na ole na isiokwu dịtụ nro.